Ngu kukhethwa igama ingane abantu wemfanelo kakhulu kusukela kudala. Ngaso sonke isikhathi kuthiwa igama elithi ubeka uphawu zayo kuphela uhlamvu, kodwa futhi ikusasa lawo indoda, ngakho-ke, ukukhuluma njengesifenqo, njengoba enikubiza ngokuthi isikebhe, ngakho-ke ngeke ukuntanta!
Igama kanye nenombolo
Nastasia (Anastas) - ifomu njengabesifazane kwegama Anastasia, okuyinto elihunyushwe esuka lesiGreki lisho ngeSonto noma bavuswa. Futhi, ochwepheshe bolimi abaningi bathambekele zikholelwa ukuthi igama elithi inenani double Nastasya, ngoba esuselwe kuhlanganiswe zesifazane amagama Anna futhi Taisia. Ngakho, igama elithi Anastasia uzalela izici eziyizici la magama. Nge-Greek Anna - "umusa", Taisiya - "okuqondene unkulunkulukazi u-Isis," okusho ukuthi ehlakaniphile elithelayo.
Inani Igama Nastasia for girls
Ngiseyingane, Nastassja nobudlelwano nokukhathalela yonke into eziyibonayo, oneminyaka engu-pochemuchek inzalo yayo ngokuphelele konke, ngakho abantu abadala kungaba nzima ukulondoloza imibuzo njalo amantombazane. Ukuze isimo sengqondo lula futhi bejabule Nastya uthando kubantu ababezizungezile, kodwa kufanele baqaphe abazali, ngoba contact intombazane futhi kulula ukuze akhohlise. Ngesikhathi igama ithenda yobudala Nastasia (value - ovusiwe) kusiza intombazanyana ukuba babhekane nalesi sifo. Nastya kusuka ebuntwaneni iyafaneleka ukuba creative futhi ubonise ithalente ngomdwebo, umculo izifundo nokudansa. Le ntombazane ngokuvamile likhula ingane okuhlukahlukene, kuziwa kalula ukufunda, kodwa sifinyelela phezulu ngaphansi kwengcindezi yena akavumanga, ngoba wayenza nje ukuthi wayenesithakazelo. Ngakho-ke, abazali ngokuvamile asikwazi ukwenza oda egumbini ezivela kuye. Nastia kuyoba mnandi kakhulu ukufunda incwadi noma ukupenda abalingisi bakho abayizintandokazi lwasemaphusheni, ikakhulukazi intombazane, kokuba umcabango acacile ngokuvamile iziveza indaba Heroine.
Esikoleni, Nastia ayinakho izinkinga nabangani, ngoba ezifana nezimfanelo ezakhayo njengoba umusa, ukupha, ubulungiswa, kanye nekhono ukuvikela umbonwabo. Ngaphezu kwalokho, ukuthi kahle ababeyizazi amadoda futhi kungenzeka lokuxhaphaza ngisho kubo. Eminyakeni yokuqala, lapho singakwazi ukuhlakulela izimfanelo ubuholi Nastasya, abazali nabanye ungase ubhekane izici ohlangothini emuva yobuntu bakhe nginenhliziyo nokuphikelelayo, ezifana inkani, nabaqashi abafuna okungaphezu ngisho khukhumala.
Nastasia - nencazelo yegama kanye nohlobo isiphetho
Sikhula, Nastasia uguqulwe inkosazana enhle. Nge ubuhle, Wit kanye nesitayela, ingenayo ukushoda abayithandayo. Ngokukhetha Anastasia efanelekayo ngokucophelela, ecabanga ngokwabo hhayi kuphela kodwa futhi mayelana nezingane esikhathini esizayo. Ngakho-ke, njengoba umthetho, yiba umkhaya oqinile futhi engumyeni onothando. Naphezu umbhikisho intsha mayelana yokuhlanza, omdala Anastasia - inkosikazi enhle, equkethe ekhaya lakho bahlanza futhi bahlobise ke ukunambitheka kwakhe evamile. Umndeni Nastasya onothando futhi unkosikazi abakhathalelayo nonina. Ngu izingane ukufundisa efika wemfanelo omkhulu, ngakho hhayi kuphela wayemthanda futhi oblaskanny, kodwa futhi wonke-round ukuthuthukiswa, Anastasia phela lokho esithathwayo, uzama ukuletha ekupheleleni. Ngenxa kwesimo sayo esiqhubekayo olindele Nastasya ingafinyelela Imiphumela okusezingeni eliphezulu emsebenzini wakhe, uma kukhona ukuya emsebenzini ngenhloso nangobuchule.
Yini enye kunendaba? Qamba Nastasia ekubhuleni libonisa inombolo 9. izakhiwo kule nombolo kukhombisa nobubanzi umphefumulo, ikhono ukuba nozwela futhi ukuze usize abanye. Naphezu levity nobumbi propensity ukuze iphupho, abanikazi ayisishiyagalolunye okuthiwa ku umbukiso izimfanelo ubuholi, futhi ejabule nokuzibopha ubuhle kwenza "nines" ekhangayo kwabobulili obuhlukile. Nokho, isibalo sabantu ukuthi badinga ukusebenza ku ngokwabo, ngenxa eliphezulu ukuzethemba kwabo kuvame ukuholela khukhumala nobugovu.
Uma ucabangela ukubaluleka kwegama Nastasia (Anastas), kufanele kuphawulwe kwayo okuqhubekayo phakathi namakhulu eminyaka. Siyaziqhenya ukugqoka leli gama njengoba amakhanda kubekwa, futhi abesifazane amakilasi elula. Anastasiya Yaroslavna, indodakazi omkhulu Kiev Prince Yaroslava Mudrogo, lapho washada Hungarian Duke Androsh, iseluleko sakhe kwangisiza ukuba kungene sobukhosi. Ukuze ingqondo nokuzinikela kwakho izithakazelo isimo ukujabulele izibalo abahlonishwa zombusazwe isikhathi nothando lwabantu. Anastasia Romanov, indlovukazi zonke eRussia, wayethandwa umyeni hhayi kuphela wakhe, inkosi enkulu yakwa-Ivanom Vasilevichem Groznym, kodwa abantu Russian. Princess Anastasia Romanova - Grand Princess, indodakazi uNicholas II, beqa eyisimangaliso emphakathini international zazisalokhu zikholelwa iminyaka eminingi. Ukwahlulela ngokubukeka ubuntu zomlando, ebekiwe umqhele abazali babo, ukushaya indodakazi Nastassja, igama nencazelo, uhlamvu impahla yayo namanje kunakwe.
Smart, uhlobo, enhle futhi benesibindi Nastya - Heroine abathandwa abaningi Folk yezinganekwane legends: Nastasya Mikulishna eyaziwa ngokuba amandla nesibindi sakhe, kuyinto Heroine of the izinganekwane Slavic mayelana iqhawe Dobrynya futhi Alyosha Popovich. Anastasia uhlamvu elihle Russian Folk yezinganekwane kusukela ukuqoqwa Alexander Nikolayevich Afanasyev. Nastasya Korolevichna e Slav Epic ohlakaniphile futhi benesibindi sasekhaya zamaqhawe lunegazi lasebukhosini, waba ezikhulekelwa ngoba zobuqhawe bakhe. Zonke temdzabu Heroine Nastasia bathethelele igama, ukubaluleka okuyinto, njengoba siyazi kusuka esiGrekini - evuselwa ekuphileni. Endleleni izinhlamvu ihlangabezana eziningi nezingqinamba adventure, ngazo ukugubha ukukhululwa kwe abawinile, naphezu ngezingozi izingobe yezitha.
Ukufaneleka of Taurus abesifazane futhi amadoda Sagittarius: incazelo emfushane
Kanjani ukuqala i aquarium? Heater for aquarium. tank yokuhlanza ekhaya